दशैंमा घरकी देवीको अपमान - Jagaran Post
जागरणपोस्ट १ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:५८
बाल्यकालको दशैं सधैँ रमाइलो र बिर्सन नसकिने खालको हुन्थ्यो । दशैंमा दुर्गामाताका ठूलाठूला मूर्तिहरू स्थापना गरिन्थे र चारैतिर बज्ने दशैंका गीतहरुले पूरै सहर नै गुञ्जायमान हुन्थ्यो । साथीहरूको झुण्ड बनाएर ती मूर्ति हेर्न त्यो बाल्यकाल अहिले सपनाजस्तो लाग्छ । मूर्ति हेर्न जाँदा सित्तैमा खान पाइने थरिथरिका मिष्ठान्न परिकारले बाल्यकाललाई लोभ्याउँथ्यो । मूर्ति स्थापना गरिएका ठाउँमा विष्णु र दुर्गाका मन्दिर राखिएका हुन्थे । त्यहाँ भव्यतापूर्वक पूजाआजा हुन्थ्यो, बली चढाइन्थ्यो ।
अझ गाउँको दशैं शहरभन्दा फरक र रमाइलो हुने भएकाले दशैं सुरु भएसँगै गाउँ जाने रहरले शहर छोड्न बाध्य बनाउन्थ्यो । शहरमा बस्नेहरु गाउँमा फर्किन्थे । गाउँमा जाँदा अत्यन्तै रमाइलो लाग्थ्यो । दशैंको टीकाका दिन सबैभन्दा अगाडी टिका लगाउनका लागि रोलक्रम भङ्ग होस् भनेर झगडा नै हुन्थ्यो । बालयकालका ती दृष्यहरु अझै पनि मानसपटलमा घुमिरहन्छन् ।
घरमा थरिथरिका परिकारहरू बनेको देख्दा मलाई खुब रमाइलो लाग्छ । दशैंमा नयाँ लुगा किन्नका लागि जुन व्यग्रता र किनिसकेपछि जुन खुसी हुन्थ्यो त्यो व्यग्रता अब उमेर र जिम्मेवारीसँगै पग्लिँदै गयो । बाल्यकालमा न चिन्ता, न सुर्ता, न जिम्मेवारी । सायद त्यसैले होला, मनमा उमङ्ग र उत्साह पनि उस्तै हुन्थ्यो । अझ मलाई फुलपाती भन्ने वित्तिकै विगतका यादहरुले मन मस्तिष्कलाई ओगटेर राखिदिन्छन् । मनमा विगतका ती भोगाई र यादहरुका अनेक खालका प्रश्नहरु छन् जवाफ कोसँग होला ?
असोज महिनामा दशैंको नवरात्री चलिरहेको थियो, दशैं मनाउन हामी स्याङजा गइसकेका थियौं । बदलिदो मौसम, हल्का जाडो, दशैंको चहलपहल र रौनकले गाउँघरलाई छपक्कै छोपिसकेको थियो । आँगनमा गुन्द्री बिछ्याएर वरपर घरका देवरानी जेठानीहरुको जमघट, दाजुभाईका भलाकुसारी, बुवा र हजुरबुवा पुस्ताहरुका रमाइला कुराकानी चलिरहेका थिए । केटाकेटीहरु आफ्नै धुनमा। एक्कासी चप्पल पड्किएको आवाज कानमा ठोक्कियो, देवरानी जेठानी, दाजुभाई सबै जना जुरुक्क उठे, केही डराएजस्तो, केही हिच्किचाएजस्तो । मैले सबैलाई बस्न आग्रह गरिरहेकै थिए । एक्कासी मेरो नजर उपासु (दुर्गा मन्दिरमा नौं दिन पुजा गरेर उपवास बस्ने व्यक्ति) माथि पर्यो। उनीहरुलाई देखेपछि मैले बुझे । नौं दिनसम्म मन्दिरमा पुजा गर्न बस्दा महिलासँग बोल्न नहुने त्यहाँको चलनबारे म पनि जानकार नै थिए । यत्तिकैमा दुईजना उपासु आँगनमै आइपुगे । फुलपातीका दिन सबैको घरघरमा पुगेर फलफुल, चामल उनीहरुको झोलामा राखेर दान दिने चलन पुरानै थियो ।
उपासुको चलनअनुसार दान नदिएमा घरमा जे छ, त्यही लिएर हिँड्ने चलन रहेछ । यत्तिकैमा ससुरा घर बाहिर निस्किनुभयो । उहाँ अलि हतास देखिनुहुन्थ्यो । म भने एकनासले ती दृष्यहरु हेरिरहेकी थिए । उपासुमध्ये एकजना नाताले भिनाजु पर्ने हुनुहुन्थ्यो, आँखा जुध्यो, भिनाजु मुसुक्क हाँस्नु भयो, तर बोल्नुभएन, यतिका वर्षमा भेट भएकी सालीसँग बोल्ने इच्छा उहाँको अनुहारले बताइरहेको थियो । हाम्रो परम्परा र संस्कृतिले बन्देज गरिदियो । उहाँ बोल्न सक्ने कुरै भएन, उपासुलाई दिने फुलपाति र अक्षता हातमा लिँदै ससुरा बुवालाई के–के मन्तर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो मैले बुझिन् , भेनाको हेराइ र आँखाले सञ्चै छौं भनेजस्तो महशुस भयो ।
म दङ थिए, अर्को एक जना नाताले छोरा पर्ने थिए । उनीहरु मेरो मुखमा हेरिरहेका थिए । यतिकैमा मैले भने के परम्परा हो, महिलासँग बोल्न नहुने, आखिर किन ? यति भनेपछि भिनाजुले पनि मुख खोल्दै भन्नुभयो, ‘हो नि, यो चलन मलाई पनि मन परेको छैन् । अनि त साली भिनाजुको सञ्चो बिसञ्चो, हालखबर सोध्ने क्रम सुरु भयो । मैले पनि उहाँलाई सोधे, घरमा दिदीसँग पनि बोल्नुभएको छैन ? उहाँले सहजै जवाफ दिनुभयो, ‘नाइ’ । मलाई जवाफ आश्चर्यपूर्ण लाग्यो । किनकी, नवरात्रमा एउटा देवीको नाममा पुजा गर्ने पुजारी घरकी देवीसँग बोल्दैनन् । मलाई त्यो दिन परम्परा तोडेको महशुस गर्दै आफूलाई गर्व महशुस गरे । दुर्गामाताले पनि घरकी देवीसँग नबोल्नु भन्नुभएको त छैन नि ? मैले प्रश्न तेस्र्याउँदै उपासुहरुलाई सोधे, उनीहरु परम्परालाई समर्थन गरिरहेकै थिए ।
यता सासुआमा परम्परालाई तोड्न नसकिने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो । मेरो जवाफ थियो, ‘आज पनि यस्ता परम्परामा अल्झिरहेको हाम्रो समाजले महिलालाई कसरी सम्मान दिन्छ ? दुर्गामाताले महिषाशुर नामको दैत्यलाई खतम गरेको किंवदन्ती छ । ‘महिलालाई लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती वा सृष्टिदाता जननीको रुपमा हेर्न यो समाजमा किन विभेद छ ? जहाँ महिलाको अपमान हुन्छ, त्यहाँ ईश्वरले पनि बास गर्दैनन्’ भन्ने भनाईलाई हाम्रो समाज अझै पनि आत्मासाथ गर्न चाहँदैन । महिला सशक्त भए परिवारसँगै राष्ट्र सशक्त बन्छ । देवीको पुजा गरिरहँदा घरकी देवीको अपमान भइरहेको छ । यस्ता परम्परा र कुरितीलाई हटाउन जरुरी छ । आजपनि यही प्रश्न मेरो मनमा अल्झिरहेको छ । यसको जन्मदाता को होला ? कसरी यो संस्कृति र चलनलाई स्थापित गरिएको होला ? यसको जवाफ कोसँग हुनसक्छ, यस्ता प्रश्नको गाँठो कहिले फुकाउन सकिएला ?